कुन बार जन्मिएका र कुन राशीका मान्छेले कति धन कमाउछन् ? हेर्नुहोस - Internet Sansar
Home / Jyotish / कुन बार जन्मिएका र कुन राशीका मान्छेले कति धन कमाउछन् ? हेर्नुहोस
कुन बार जन्मिएका र कुन राशीका मान्छेले कति धन कमाउछन् ? हेर्नुहोस
internetsansar October 13, 2019	Jyotish Comments Off on कुन बार जन्मिएका र कुन राशीका मान्छेले कति धन कमाउछन् ? हेर्नुहोस 359 Views
आइतबारको दिन सूर्यको हो भने सोमवारको मुख्य ग्रह चन्द्र हो । मंगलवार मंगलको प्रभाव हुन्छ भने बुधवार बुधको । विहीबार वृहस्पति र शुक्रवार शुक्रको प्रभाव सबै भन्दा बढी हुन्छ । शनिवारको कारक ग्रह शनि मानिन्छ ।ज्योतिषका अनुसार जुन बार जन्मियो त्यो बारको ग्रहको प्रभाव जीवनका सबै पाटामा पर्छ । मान्छेको स्वभाव र भाग्य समेत जन्मबारले निर्धारण गर्ने ज्योतिष शास्त्रीको दावी छ । कस्तो हुन्छ कुन बार जन्मिनको मान्छेको स्वभाव र भाग्य थाहा पाउनुस् ।
पुरुष आइतबार जन्मिने मानिस भाग्यशाली हुन्छन् । उनीहरुको आयु पनि लामो हुन्छ । यस्ता ब्यक्ति कम बोल्ने र कला र शिक्षामा अगाडी हुन्छन् । यो बार जन्मिने ब्यक्तिमा धार्मिक आस्था पनि हुन्छ र घर परिवारका सदस्यलाई खुसी राख्न अधिक प्रयास गर्छन् । तर यिनीहरुलाई २० देखि २२ वर्ष सम्म दुःख हुन्छ । स्त्री आइतबार जन्मिने स्त्री दान-पुण्य गर्ने र बलशाली एवं चतुर हुन्छन् ।
पुरुष सोमबार जन्मिने ब्यक्तिको बोली मिठो हुन्छ । यस्ता ब्यक्तिको जीवनमा सुख दुख बराबर जस्तै हुन्छ किन भने उनीहरुलाई दुःख सुख उस्तै उस्तै लाग्छ । सोमबार जन्मिने ब्यकेति विद्वान, कला कुशल र बहादुर पनि हुन्छन् । सोमबार जन्मिने ब्यक्तिलाई श्वास प्रश्वासको रोग हुन सक्छ यस्ता ब्यक्तिलाई ९, १२, २७ वर्षमा कष्ट हुन्छ । स्त्री सोमबार जन्म भएका महिला सुन्दर हुन्छन् । यस्ता महिलामा मिठो बोली र शान्ति प्रिय र पुत्रवति हुन्छन् ।
पुरुष मंगलबार जन्म हुने ब्यक्ति सामान्यतया धनी हुन्छन् । यस्ता ब्यक्तिको स्वभाव उग्र हुन्छ । यसै कारण उनीहरुसँग मानिसहरु वेखुसी हुन्छन् । यिनीहरुलाई छाला सम्बन्धी रोग हुन सक्छ । दुख र सुख आउने जाने भैरहन्छ । स्त्री ज्योतिषका अनुसार मंगलवार जन्म भएका स्त्री कठोर हृदयका हुन्छन् यस्ता स्त्रीमा दया माया कम हुन्छ । यस्ता स्त्री दुब्ला पातला र झगडालु समेत हुन्छन् ।
पुरुष बुधबार जन्मिने ब्यक्ति धर्मकर्ममा मन भएका हुन्छन् । यिनीहरुको बोलीमा मिठास हुन्छन् । यिनीहरुको ८ र २२ वर्षको उमेरमा कष्ट पाउने योग हुन्छ । स्त्री बुधाबार जन्मिने स्त्री कुनै विशेष क्षेत्रमा रुचि राख्ने र विशेषज्ञता हासिल गर्ने हुन्छतन् । सरस्वतीको विशेष कृपा हुने हुँदा यिनीहरु सुन्दर र शुसील पनि हुन्छन् ।
पुरुष विहीबार जन्मिने पुरुष विद्वान र पराक्रमी हुन्छन् । यिनीहरुले जीवनमा धेरै उतार चढाव र समस्या झेल्नु पर्ने हुन्छ । तर पनि साहसी हुन्छन् । यिनीहरुसँग संगत हुनेहरु खुसी हुन्छन् । विहीबार जन्मिनेहरुलाई ७, १२, १३, १६ र ३० वर्षमा संकट पर्छ । स्त्री जुन स्त्रीको विहीबार जन्म हुन्छ त्यस्ता महिला उच्च शिक्षा हासिल गर्ने र सर्वगुणी हुन्छन् ।
पुरुष शुक्रबार जन्मिने ब्यक्ति हँसिलो स्वभावका हुन्छन् । बुद्दीमान र मृदुभाषी यिनीहरुको स्वभाव हो । यिनीहरु सहनशिल पनि हुन्छन् । यिनीहरु शौखिन हुन्छन् र २० र २४ वर्षको उमेरमा कष्ट हुन्छ । स्त्री कुनै पनि स्त्री शुक्रबार जन्मेकी छे भने उसको श्वभाव चंचल हुन्छ । यस्ता स्त्री मस्ती मजाक गर्छन् । परिवार र समाजमा विशेष इज्जत हुन्छ । केही काला रंगका भएपनि सुन्दर हुन्छन् ।
पुरुष जुन ब्यक्तिको जन्म शनिबार हुन्छ उनीहरु कृषि ब्यावार वा प्रविधीको क्षेत्रमा रुची राख्छन् । यिनीहरुका लागि बाल्यकाल कष्टपूर्ण हुन सक्छ । भाइ बहिनी वा दाइ दिदीबठ्ठ सन्तुष्टी मिल्दैन । यिनीहरुलाई २० र २५ वा ४५ वर्षमा कष्ट हुन्छ । स्त्री शनिबार जन्मिने स्त्री दुबली पातली हुन्छन् तर अग्ला । सामान्यतया यस्ता स्त्री कालो वर्णका हुन्छन । यस्ता महिला अरुका कुरा काट्ने पनि हुन् सक्छन् ।यी चार राशीले निकै नै धन कमाउँछन् हेर्नुहोस् कतै तपाईको राशी त परेन ? विशेषगरी निम्न ४ राशी हुने मानिसले निकै धन कमाउने गर्छन् भनेर धर्मशास्त्रमा उल्लेख गरिएको छ
धनको सम्बन्ध दोस्रो र आठौं स्थानमा रहेका राशीसँग जोडिएको हुन्छ । यही भएर दोस्रो स्थानमा रहेको वृष राशी हुने मानिसले धन कमाउने योग बढी हुने गर्छ । वृष राशीको गुरू शुक्र भएका कारण पनि यो राशी हुने मानिसहरू आकर्षक र महंगा सामान किन्न सौखिन हुन्छन् ।वृष राशी हुने मानिसहरू औसत वस्तुलाई त्यति मन पराउँदैनन् । शुक्र ग्रहलाई धन, विलासिता, तथा मोजमस्तीको सूचक पनि मानिन्छ ।र यही कारण उनीहरू धन कमाउन निकै मेहेनत गर्ने र कमाउने अवसर खोज्ने गर्छन् । यो राशी हुने मानिसले परिश्रमको महत्व बुझ्नुका साथै मोजमस्ती पनि गर्छन् । साथै वृष राशी हुनेहरू निकै जिद्दी गर्ने र आफूले चाहेको कुरालाई पाएर नै छोड्ने प्रयास गर्छन् ।
हामीले केहि सम्बन्धित थप जानकारी दिइएका छाै यी हुन तपाई चाँडै धनी बन्ने र भाग्य बदलिने सकेंतहरुलक्ष्मीले कुन बेला र कसरी तपाईहामीमा कृपा गर्नुहुन्छ त्यो हामीलाई थाहा नहुन सक्छ । जे गर्दा पनि सफल नँहुदा जो कोही पनि निराशाको शिकार बन्नु स्वभाविक हो।शास्त्रका अनुसार यस्ता सकेंतहरु छन् जसले तपाइको जीवनमा लक्ष्मीको प्रवेश र भाग्या चम्कीदै छ भन्ने सकेंत गर्दछ । केहि यस्ता सकेंत छन् जसले तपाईलाई भाग्य चम्कीन लागेको सकेंत गर्दछ ।जानीराखौ यस्ता सकेंतहरु के–के हुन् ।
१.जब तपाई सपनामा पानी, हरियाली र लक्ष्मीको वाहान उल्लु देख्नुहुन्छ सम्झिनुस तपाइको भाग्या बदलिदै छ ।
२. तपाइको घर अफिसमा अकास्मत उल्लु आउँछ भने तपाइलाई चाडै धन् प्राप्ती हुदैछ ।
३. यदी तपाइको सपनामा सेतो सर्प, पहेलो सुनजस्तो सर्प देखिनु हुन्छ भने तपाइचाडै धनि वन्ने योग छ ।
४.शुक्रवारको दिन लक्ष्मीको पूजा गरीन्छ यदि यस दिन् कुनै केटिले सिक्का दिइन् भने चाडै तपाइलार्इ धन् प्राप्त हुदैछ ।
५. हामी प्राय सर्पदेखी डराउँछौ तर धन र सर्पकोवीच अत्यन्त नजीकको सम्वन्ध हुन्छ । यदि तपाइको घर वरीपरी सेतो सर्प देखीयो त्यहाँ केही विशेष खजाना हुनसक्ने सम्भावना हुन्छ ।
६. हामी दिशा देखि खिनाउछौ तर हामीले सपनामा दिशा देख्यौ भने पनि प्रसस्त धन आर्जन हुने सम्भावना हुन्छ ।
Previous पशुपतिनाथ मन्दिरको बारेमा १० रोचक तथ्य जुन सुनेर छक्क परिन्छ…
Next सन्तान स्वस्थ र भाग्यशाली होस् भन्ने चाहनुहुन्छ, गर्नुहोस् गर्भ अवस्थामै यस्तो मन्त्रको जप
धनु, वृष र तुला राशि हुनेले नछुटाइ पढ्नुहोस्। एक शेयर गर्नुहोस् आजको दिन सिद्ध रहनेछ।
बिहानै उठेर यस्ता संकेत देखिए भने सम्झनुहोस् केही राम्रो हुँदैछ ! ओम नम शिवाय लेखेर सक्दो सेयरबिहानै उठेर यस्ता संकेत देखिए भने सम्झनुहोस् केही राम्रो हुँदैछ ! ओम नम शिवाय लेखेर सक्दो सेयर गर्नुस
घरको ढोकामा यी चिज राख्दा आउँछ खुशियाली